Fayyaa fi Jaalala Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala
Admin - Dec 23, 2020
Admin - Jun 30, 2017
Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii kan hin beekamin ammoo...
Admin - Mar 14, 2017
Admin - Mar 6, 2017
Yeroo dheeraadhaaf mana keessa turuun, keessumattuu yeroo ijoollummaa, rakkoo ijaa ‘myopia’ jedhamuuf (fagotti waa arguu dadhabuu) kan nama saxilu ta’uu isaa beeksisan. Qorattoonni Northwestern...
Admin - Jan 31, 2017 0
Namoonni tokko tokko rakkoo dagachuu, waa yaadachuu dadhabuu, qabu. Rakkoon kuni namoota gosaan, salaafi umriin gargar hinbaasu. Qorannoon akka agarsiisutti, rakkoon waa dagachuu kuni,...
Admin - Jan 17, 2017 0
Qaaraa ykn qacaa diimaa nyaachuun carraa du’uu dhibbeentaa 13 akka hir’isu qorannoon ifa godhe. Akka qorattoota Yunivarsiitii Vermont (Larner College of Medicine) biyya Ameerikatti...
Horsiisee-bultoota Itoophiyaa miliyoona 2ol ta'an gargaarsi hatattamaa dafee hin dhaqqabu taanaan lubbuun isaanii balaa guddaaf saaxilamuun kan hin oolle taúu Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii (UN)...
Ruuziin sobaa laastikii irraa hojjatame Naayjeeriyaa keessatti too'annaa jala oole. Ruuzni sobaa kuni laastikii 'waan baqu' irraa kan tolfamee fi gara Naayjeeriyaatti yoo seenu...
Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni
Abdiisaa - Nov 17, 2015 0
Namoota buna dhuguu jaalattaniif oduun gaariin asbayeera. Guyyatti, akka qorannoon barruu Circulation addeessetti, buna kobbee shanii gadi dhugdu taanaan carraan isin dhibee onnee, sukkaara,...
Abdiisaa - Nov 11, 2015 0
Dhaabbanni miti-mootummaa biyya Deenmaark, Maternity Foundation, fayyadama bilbilaa (Mobile App) deettuu gargaaru Itoophiyaa keessatti hujii irra oolchuu ibseera. Fayyadamni bilbilaa (App) kuni daa’imman nagayaan...
Tan qaama saalaa dheeressa jettee nama ajjeeste hidhaa woggaa 5’n adabamte
Biyya Ameerikatti, jiraattuu naannoo New Jersey kan taate, Kasia Rivera adabbiin woggaa 5 kan itti murtaaye yaalii qaamaa saalaa dargaggeessa gannaa 22 guddisuuf ykn...
Hubaatii sukkaarri fayyaa namaa irraan gayu
Fira - Oct 30, 2015 0
Jaarraa hedduuf sukkaarii nyaata mi’eessaa, qaamaafis faayda-qabeessa ta’eeti kan ilaallamaa ture. Hanga yeroo dhihootti, sukkaaratti baay’inaan dhimma bayaa kan turan hawaasa hundaa miti. Ummata...
Amaloonni namoota ciccimoo irraa calaqqisan maal fa’a?
Abdiisaa - Oct 28, 2015 0
Dhimmoota heddu, milkaayuufi milkii dhabuu, funduratti tankaarfachuufi bakka yaadan hanqachuu kan murteessan. Isaan keessaa inni tokko, fagoo hin deeminaa, amala ykn aadaa keenya. Milkaayina...